Abenzi nabahlinzeki be-Ethernet Media Converter | Ifektri yaseChina Ethernet Media Converter
100Mbps SFP Abezindaba Converter ZJ-1100SFP
I-100Mbps Ethernet RJ45 iye kwi-SFP Media Converter iguqula i-100BASE-FX fiber ibe yi-100Base-TX media media noma okuphambene nalokho. Nikeza ngesixazululo esilula futhi esonga ukonga inethiwekhi esekwe ku-fiber optic yokwelula ukufinyelela kwesiginali. Ukudluliswa kweMedia Converter kufika ku-120KM. Idizayini ye-plug-and-play, okulula ukuyifaka. Ingasetshenziswa njenge-stand-alone, noma ifakwe ku-2U 14 slot media converter chassis enamandla aphakathi nendawo. Izici • 100Mbps Ethernet RJ45 to SFP Media Converter • Half or ...
100Mbps Single Fibre Abezindaba Converter ZJ-3100AB
I-10 / 100M Fibre Media Converter iguqula i-100BASE-FX fiber ibe yi-100Base-TX media media noma okuphambene nalokho. Nikeza ngesixazululo esilula futhi esonga ukonga inethiwekhi esekwe ku-fiber optic yokwelula ukufinyelela kwesiginali. Ukudluliswa kweMedia Converter kufika ku-120KM. Idizayini ye-plug-and-play, okulula ukuyifaka. Ingasetshenziswa njenge-stand-alone, noma ifakwe ku-2U 14 slot media converter chassis enamandla aphakathi nendawo. Izici • 1 Port 10 / 100M Media Converter, Imodi eyodwa Fibre eyodwa • Isigamu noma i-ful ...
100Mbps Dual Fibre Abezindaba Converter ZJ-1100S-25
I-10 / 100M Fibre Media Converter iguqula i-100BASE-FX fiber ibe yi-100Base-TX media media noma okuphambene nalokho. Nikeza ngesixazululo esilula futhi esonga ukonga inethiwekhi esekwe ku-fiber optic yokwelula ukufinyelela kwesiginali. Ukudluliswa kweMedia Converter kufika ku-120KM. Idizayini ye-plug-and-play, okulula ukuyifaka. Ingasetshenziswa njenge-stand-alone, noma ifakwe ku-2U 14 slot media converter chassis enamandla aphakathi nendawo. Izici • 1 Port 10 / 100M Media Converter, Imodi eyodwa Dual Fibre • Isigamu noma sigcwele ...
2U 16 Chassis Chassis ikwazi ukwamukela inhlanganisela yezingcezu ezingafika kwezingu-16 zamamojula wevidiyo namamojula evidiyo / wedatha. Idizayini ye-AC110 / 220V switch Mode Power Supply (SMPS) isetshenziselwe ukwenza imodyuli isebenze ngokuzimela ngaphandle kokuphazanyiswa kokucishwa kwamandla okukodwa kanye nokwehluleka kwamanye amamojula ngaphakathi kwe-chassis. Ukuthembeka okuphezulu nokuqina kwemodyuli ngayinye kuyatholakala. Izici • 2U 16 Slots Chassis yeMedia Converter • Ukwamukela Ukunikezwa Kwamandla Amabili, kuzothuthukisa ukuthembeka kwe ...
2U 14 Slots chassis ikwazi ukwamukela amasethi ayi-14 we-10 / 100M noma i-10/100 / 1000M abaguquli bemidiya abazimele bodwa. Idizayini ye-AC110 / 220V switch Mode Power Supply (SMPS) isetshenziselwe ukwenza imodyuli isebenze ngokuzimela ngaphandle kokuphazanyiswa kokucishwa kwamandla okukodwa kanye nokwehluleka kwamanye amamojula ngaphakathi kwe-chassis. Ukuthembeka okuphezulu nokuqina kwemodyuli ngayinye kuyatholakala. Izici • 2U 14 Slots Chassis yeMedia Converter • Ukwamukela Ukunikezwa Kwamandla Amabili, kuzothuthukisa ukuthembeka kweRack • Sup ...